Tokony hohanina ny sakafo ao amin'ny Gulf Coast Mississippi
6 Zavatra tokony hohanina eo amin'ny morontsirak'i Gulf Mississippi
Ny sakafo dia iray amin'ireo fahafinaretana lehibe indrindra mandritra ny fitsidihana ny Gulf Coast Mississippi. Ny fiantraikan'ny fofona frantsay, Cajun, ary kreôla dia mitovitovy amin'ny New Orleans mpifanolo-bodirindrina, fa ny Mississippians kosa dia manolotra ny fanitsiana manokana izay tsy tokony hohadinoina. Ity ny zavatra mila omeo amin'ny fitsidihana manaraka anao.
Raha tsy te-hanangom-bozaka ny kibonao ianao rehefa mianjera avy ao anaty siny kely misy po-boy, dia mety kokoa ny manaingo ny Étouffée anao. Ity lovia ity (antsoina hoe Ay-too-Fay ) misy karazana gripa goavam-be na kirihitr'ala, voaomana amin'ny sipo mamy, mofomamy sy roux.
Ity zavakanto ao Cajun ity dia azo jerena avy any Florida mankany East Texas, ary na dia ny shrimp aza dia singa mahazatra ao anaty sokatra, dia matetika izy io no ampiasaina amin'izay mety ho be dia be amin'ny andro iray. Ny ampahany betsaka amin'ny vary fotsy dia misy, saingy azo asaina ho latabatra ho an'ireo izay tsy te hanambatra ny vary sy ny zavatra hafa.
Ao Biloxi , ny Trano Firaisana Frantsay ao Mary Mahoney dia manolotra sasantsasany amin'ireo trondro trondro misy sombin-tsakafo miaraka amin'ny fanangonana ny Étouffée Crawfish . Manomboka 11 maraina hatramin'ny 10 alina isan'andro, afa-tsy ny alahady.
Ny hevitra ambadiky ny sandwich po-boy dia ny hanangona baguette (mofo frantsay) miaraka amin'ny fanampiana goavana amin'ny zavatra be dia be. Azonao atao ny mahita milomano sy manamboatra po-lahy amin'ny manodidina ny Thanksgiving Day, ny poons, na ny tovovavy eo an-toerana.
Ny Legend no nanolotra ny fanompoany tany New Orleans tany amin'ireo mpiasa tsy an'asa nandritra ny Depression Lehibe. Tsy afaka nifidy ny mpangataka.
Ny dikan-teny Mississippi dia mendrika ny manandrana, indrindra raha mamakivaky shrimp, ny vokatra tsara indrindra avy amin'ny seafooda an'ny fanjakana.
Araka ny efa nieritreretanao azy dia tsy sakafo nohaninao miaraka amin'ny fomba amam-panao voalohany sy mety. Ny po-ankizilahy dia somary marefo, ary mety ho voatery hamono ny akanjo sasany amin'ny kitapo ianao alohan'ny hanaovana an'io. Indraindray, misy ankizilahy mitafy salady, tongolo, ary mayonnaise. Ny voanio jona sy ny saosy mafana dia matetika amin'ny halavan'ny tanana amin'ny toerana manompo ny sandwich.
Ao Gulfport, i Blowfly dia manompo karazana tovolahy valo. "Diners, Drive-Ins & Dives," ary "Emeril Live" dia samy nampiditra ny trano fisakafoanana tamin'ny mpijery televiziona tsirairay.
Tsy manjary loatra ny fisainana ho an'ny fofona mofomamy voatoto. Toerana sasantsasany, izay mikasika ny zavatra rehetra hitanao eo amin'ny takelakao.
Saingy fantatry ny Mississippians ny nanangona an'io lovia tsotra io ho an'ny endrika art culinary.
Manomboha amin'ny tsaram-bary matevina, ary ampio ny siramamy tianao indrindra, angamba kobam-bary na kalsopia. Avy eo, manorata saosy ravioka (fanangon-tsakafo Frantsay iray ahitana menaka sy sakafom-bary ary dijon Dijon).
Mbola misalasala momba ny voatabia maitso maitso? Asio tolotra iray na roa. Fampitandremana: ny olona sasany dia mihazakazaka mora ihany rehefa avy manomboka amin'ny "OK, manandrana izany aho ..."
Te hanandrana? Bacchus dia manohana ny filaminana ambony indrindra ao amin'io toerana io ao Biloxi.
Rehefa mandehandeha ny morontsiraka ianao, dia asaina hanandrana masaka amin'ny karazana varotra maro. Ny ankafiziny amin'ny morontsirak'i Mississippi dia ny Crawfish Monica, izay miara-manitra pasta miaraka amin'ny kitapo sy sokatra Cajun.
Ny Cafe Harborview any Long Beach dia manasongadina ny Monica ny sakafo amin'ny sakafo sakafo atoandro / fisakafoanana. Ny rivo-doza Katrina dia nandrava io trano fisakafoanana io, saingy nanangana indray ny ony i Harborview ary naverina indray taona herintaona. Manomboka amin'ny 11 ora maraina izy io, ary amin'ny 8 ora amin'ny faran'ny herinandro.
Jambalaya dia manana ny niandohany tany amin'ny morontsirak'i Frantsa sy Espana, ary manompo any amin'ny Golfa amin'ny karazana Cajun sy Kreolàna rehetra. Na dia misy fahasamihafana be aza, dia maro ny fomba fisotroan-toaka ahitana ilay antsoina hoe "Trinite" amin'ny seleria, tongolo ary piper.
Any Mississippi sy any Louisiana anefa, dia misy serivisy maro izay tsy misy legioma. Azonao atao ny misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana isan-karazany isaky ny alina amin'ny fijanonanao, mandidy an'i jambalaya, ary manadio tsiambaratelo miavaka amin'ny seza tsirairay.
Ny toeram-pisakafoanana Felix's & Oyster Bar ao Gulfport dia manolotra dikan-teny ahitana kobabola, voankazo italiana, sausage sy akoho. Manokatra 11 ora ka hatramin'ny folo hariva isan'andro izy ireo, ary manokàna ora iray fanampiny amin'ny zoma sy samedi.
cyclonebill / [CC BY-SA 2.0] / avy amin'ny Wikimedia Commons
Angamba io no mampikorontana an'i Mississippi sy ny fotaka izay namokatra io anarana io. Aza miezaka ny hahatsapa be loatra izany.
Manara-maso akaiky ireo karazan-tsakafo tapaka avy any Pascagoula mankany Bay St. Louis, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia mitovitovy amin'ny sôkôlà sôkôla miaraka amin'ny pecan, voapoizina miaraka amin'ny mofomamy misy sôkôla sy marika mivelatra. Ny tetika dia ny manompo ilay tazo mandritra ny mbola mafana amin'ny famelomana malalaka ny vanila gilasy ho toy ny topper.
Ny Rivo-doza ao Gulfport dia hametraka ity tranga mahafinaritra ity eo anoloanao. Ny lunch dia manomboka amin'ny 11:30 maraina ary ny sakafo hariva dia apetraka hatramin'ny 5-9 hariva
Natchez ho an'ny fety
Ny Torolalana ho an'ny Dia Mississippi Road Trip
Ny Valan-javaboary sy valan-javaboarin'i Mississippi
Ankamantatra ho an'ny Literatiora any Oxford, Mississippi
Airports of Mississippi
Ole Miss Rebels Football: Torolalana ho an'ny Lalao amin'ny lalao ao Oxford
DC Yoga Week 2016 ary Yoga eo amin'ny National Mall
Inona no tokony hatao? Jereo ny faritra Fenisia
Venezoela tamin'ny Jolay
Travel and Culture: Ohabolana Afrikana sy ny dikany
Mankalaza ny Taom-baovao Sinoa any Paris: 2018 Guide
Top 10 Restaurants Honolulu
Aiza no hividianana hazo Noely any Vancouver
Fako, fako ary fanodinana any Yukon
Seven Senses Hotels Resorts Spas
Ny 8 tsara indrindra fantsom-pikarakarana kambana mba hividy amin'ny 2018
Fikolokoloin'ny onjam-peo sy fisakafoanana tany Vancouver, BC